रौतहट नरसंहारमा १२ वर्ष राज्यले के गर्‍यो? प्रेसले के गर्‍यो? – Khabar Silo
रौतहट जिल्ला अदालत परिसरमा कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमले आइतबार प्रेससँग भने- ‘घटना भएकै हैन।’
अर्थात्, बाह्र वर्षअघिको नरसंहार नै ‘फेक’ हो- झूट हो।
हाम्रै सर्वोच्च अदालतले कतिपय घटनामा लाश प्राप्त नहुन सक्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ। त्यस्तो बेला प्रमाणहरूको शृंखला जोडिनुपर्छ, न्यायाधीशलाई विश्वस्त बनाउनुपर्छ भन्ने सर्वोच्चको दलिल छ। प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याउदा र सरकारी अदालतमा मुद्दा लैजाँदा यो पक्षलाई पक्कै ध्यान दिनेछन्। आशा गरौं, बेन्चमा बसेका न्यायामूर्तिले यो नरसंहारका पीडितलाई पक्कै न्याय दिनेछन्।
‘जनयुद्ध’को पृष्ठभूमिबाट आएको माओवादीले कांग्रेस-एमालेका कैयन नेता कार्यकर्ताको हत्या गरेको थियो। ‘जनयुद्ध’को विरोध गर्ने शिक्षकदेखि सामान्य नागरिक सम्मको ज्यान लिएको थियो। त्यसको जिम्मेवारी स्थापित हुने र दोषीले सजाय पाउने कुनै छनक थिएन। मुलक त्यो मार्गतिर अघि बढेकै थिएन। कांग्रेसले त्यो परिस्थितिको सुविधा आफ्ना लागि आलमको घटनामा उठायो। एमालेले विरोध गरेन। आमहत्या र नरसंहारहरूको जिम्मेवारी स्थापित नहुनु माओवादीको पनि स्वार्थमा थियो। ऊ पनि बोलेन।
संविधानसभा चुनावपछि जब रौतहट नरसंहारको ‘हल्ला’ विस्तारै फैलियो, आलमले सबै प्रमाण दफन गरिसकेका थिए। केही साक्षी जीवित थिए, तर कहाँ थिए, कसैलाई थाहा थिएन। आलमको त्रासले उनीहरू बाहिर आएर बोल्न तयार थिएनन्। प्रेस पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छियो- प्रमाण नै छैन, साक्षी नै बोल्दैनन्, के लेख्ने? के भन्ने?
गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने। रौतहट घटनाको छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्न न माओवादीको स्वार्थसँग मेल खान्थ्यो, न त्यसो गर्न ऊसँग नैतिक बल थियो। ‘जनयुद्ध’ कालमा भएका हत्याहिंसा छोपछाप पार्नु नै उसको प्रमुख ध्येय थियो।
प्रचण्डको सरकार हटाएर एमालेका माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने। उनी रौतहट र काठमाडौं दुई ठाँउबाट चुनाव हारेका थिए। पार्टीमा अध्यक्ष झलनाथ खनाल थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल र खनाललाई कोठामा राखेर ‘नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाऔं’ भने। खनालले नाइँ भन्न सकेनन्।
त्यो बेलाको राजनीतिक परिस्थिति, ‘जालिम’ समय र सबै राजनीतिज्ञ तथा पार्टीहरूका कारण आलमले उन्मुक्ति पाए भन्नु अन्याय हुन्छ। यो भनेको आफूले ओगटेको पदका कारण घटना छानबिन गर्ने र आलमलाई कठघरामा उभ्याउने प्रमुख जिम्मेवारी पाएकालाई उन्मुक्ति दिनु सरह हुन्छ।
एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले तत्काल घटनास्थल जाने, ‘क्राइम सिन’ नष्ट हुन नदिने, प्रमाण मेटाउन नदिने गर्नुपर्थ्यो। उनले यी केही गरेनन्। बरू आलमलाई प्रमाण मेटाउने परिस्थिति निर्माण गरिदिए। पीडितहरूको उजुरीसम्म प्रहरीले लिएन।
यहाँनिर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उब्जन्छ— आलमसँगको आफ्नै सम्बन्धका कारण न्यौपानेले उनलाई सघाए वा ‘माथि’ बाट प्रहरी नेतृत्वको निर्देशनमा त्यसो गरे? यो प्रश्नको उत्तर दिन न्यौपाने हाम्रासामु छैनन्। टीकापुर घटनामा न्यौपानेको मृत्यु भइसकेको छ। तर, रौतहट नरसंहारपछिका घटनाक्रमले यो प्रश्नको उत्तर खोज्न सघाउ पुर्याउँछ।
तत्कालीन आइजिपी राणाले आइतबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै त्यो घटनाबारे आफूलाई त्यो बेला कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। आफूलाई तलबाट ‘ब्रिफिङ’ आएन भनेका छन्। पछि पनि त्यो घटनाबारे थाहा नपाएको, राजनीतिक नेतृत्वले आफूसँग वा आफूले राजनीतिक नेतृत्वसँग त्यसबारे कहिल्यै कुरा नगरेको उनले बताएका छन्।
‘लाइन अफ ड्युटी’ का हिसाबले रौतहट नरसंहारमा त्यो बेला निष्पक्ष छानबिन नहुनुको जिम्मेवारी यी तीन व्यक्तिमा जान्छ।
सबैको मिलेमतोमा कुनै गम्भीर अपराध भएको रहेछ, तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रोकेकन् भने या त त्यसमा उनको सहमति छ भन्ने मान्नुपर्छ, या उनी अक्षम थिए भन्ने मान्नुपर्छ।
हाम्रो मूल समस्या प्रहरी र राजनीतिबीचको अस्वाभाविक ‘कनेक्सन’ हो। यी दुईबीच विकृत संरचनात्मक सम्बन्धको हो। सत्तासीन राजनीतिज्ञले जसरी प्रहरीलाई आफ्नो सेवक ठान्छन् र जसरी प्रहरीले त्यसलाई आत्मसात् गर्छ, त्यसले जन्माउने परिणामको हो।
त्यसो भयो भने स्वभिमान र क्षमता भएको प्रहरीले ‘म राम्रो काम गर्छु, माथि पुग्छु, आइजिपी हुन्छु’ भनेर सपना देख्छ। त्यसैअनुसारको आचरण बनाउँछ, त्यसैअनुसार काम गर्छ।
राजनीतिक पहुँच भएको वा पैसा खुवाउनेको बढुवा हुने र राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक भएर भोलि प्रहरी प्रमुख हुने हो भने, कुनै प्रहरी अधिकृतले किन कानुन पालना गर्छ? वा गराउँछ? ऊ त राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक हुन तल्लीन रहन्छ। भोलि ‘भैपरी आउने व्यवस्था मिलाउन’ पैसा जोहो गर्नतिर लाग्छ।
शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस-माओवादी सत्तामा हुँदा वरियतामा अघि रहेका एआइजीहरूलाई पन्छाएर चौथो वरियताका जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउन खोजे। हामीले त्यसको विरोध गर्यौं। देउवा र उनका नजिकका मान्छेले त्यो बेला पनि आइजिपी छान्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्ने तर्क गरेका थिए। विशेषाधिकार त पक्कै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदकै हो, तर त्यस्तो विशेषाधिकार प्रयोग विवेकपूर्ण हुनुपर्छ।
नियमकानुनको अधीनमा रहेर त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ, स्वैच्छाचारी प्रयोग गर्न पाइन्न। जसरी आफूले ठीक ठानेको प्रहरी अधिकृतलाई आइजिपी बनाउने मन्त्रिपरिषदको अधिकार हुन्छ, त्यसरी नै सक्षम प्रहरी अधिकृतको आफू प्रहरी प्रमुख हुन्छु भन्ने अपेक्षा जायज हुन्छ। लोकतन्त्रमा मन्त्रिपरिषदको अधिकार र एउटा सक्षम प्रहरी अधिकृतको वैध अपेक्षा बीच तादात्मय स्थापित हुनुपर्छ।
केही समयअघि ज्ञानेन्द्र शाहीले भरतपुरमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्न जाँदा प्रहरीका सामु सत्ताका भिजिलान्तेबाट कुटाइ खाए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उनलाई संविधानले दिएको अक्षुण अधिकार हो। त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा उनले अरूमाथि घात पुर्याए भने कानुनअनुसार त्यसको पनि उपचार छ। तर उनलाई सार्वजनिक ठाँउमा बोल्न कसैले रोक्न पाउँदैन। सांघातिक हमलाको त परै जाओस्।
अस्पतालै भर्ना हुनेगरी उनीमाथि सांघातिक हमला भयो। प्रहरी भने अझै आफ्नो कमजोरी स्वीकार्न तयार छैन।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै चितवनका एसपी दानबहादुर मल्ल भने, ‘कार्यक्रम गर्न हामीसँग अनुमति नलिने अनि सुरक्षा पाएनौं भन्ने?’
सार्वजनिक ठाँउमा कोहीमाथि हमला भयो, प्रहरी त्यहीँ उपस्थित छ भने, प्रहरीले उसलाई जोगाउने हो कि उसको निवेदन खोज्ने हो? कार्यक्रम गर्ने स्वीकृति भिन्नै विषय हो। स्वीकृति नलिएको भए, प्रहरीले नै कार्यक्रम रोक्नुपर्थ्यो। नियमअनुसार कार्यक्रम आयोजकलाई कारबाही गर्नुपर्थ्यो। नसियत दिनुपर्थ्यो। तर सत्ताका भिजिलान्तेबाट शाहीमाथि हमला गर्ने छुट दिनु हुँदैनथियो।
रौतहट नरसंहार जस्ता घटनामा राजनीतिज्ञ जोगाउने यस्तै प्रहरी अधिकृतले हो। भविष्यमा, रौतहटमा आलमले प्रहरीबाट पाएको जस्तो उन्मुक्तिको घटना नदोहोरियोस् भन्ने चाहने हो भने, तोड्नुपर्ने ‘नेक्सस’ प्रहरी र राजनीतिज्ञ बीचकै हो।
कृष्णबहादुर महरा प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल प्रहरीको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भने— प्रहरीले सत्तामा बसेका मानिसको, शक्तिशालीको, पैसा भएकाको मुख हेर्ने हैन। कानुन हेर्ने हो, कानुन पालना गराउने हो। कसैले अपराध गरेको छ भने पकड्ने हो।
कुरा सिधा छ— प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै प्रहरीले कानुन पालना गर्यो भने ऊ स्वतः जनताको सेवक हुन्छ, रक्षक हुन्छ। अनि रौतहट जस्तो नरसंहारले फेरि उन्मुक्ति पाउने छैन।
रोनाल्डो छँदा रियल मड्रिड बलियो थियो : मेस्सी